RDP Hydrophobic Giredhi Factory - China RDP Hydrophobic Giredhi Vagadziri, Suppliers
Rudzi rutsva rweRe-dispersible Polymer Powder VE3011 Zvakatipoteredza zvine hushamwari zvigadzirwa zveSilicone dhaka
ADHES® VE3011 iVinyl acetate uyevinyl copolymeryakavakirwa isiri-defoaming mhandoRe-dispersible polymer poda.Iyo inonyanya kukodzera kushongedza zvinhu zve diatom mud uyedhaka rekuzvimisa pasi.ADHES® VE3011 ndeye haina formaldehyde, yakaderera emission zvigadzirwa.
Inogona kushandiswa kugadzira zvigadzirwa zvinosangana nezvinodiwa zveEuropean standard EMICODE EC1 PLUS.
Hydrophobic Re-dispersible Polymer Powder VE3311 isina mvura zvinhu
ADHES® VE3311Re-dispersible Polymer Powderndeyepolymer hupfu hwakagadzirwa ne ethylene-vinyl acetate Copolymer, nekuda kwekuiswa kwesilicon alkylzvinhu panguva yekugadzira maitiro, VE3311 ane simba hydrophobickushanda uye kushanda zvakanaka;yakasimbahydrophobicmhedzisiro uye yakanakatensile simba;inogona kuvandudza hydrophobicity uye kubatanidza simba redhaka zvinobudirira.
Re-dispersible Polymer PowderVE3311 ndeye polymeric binder uye inopawo ahydrophobiceffect.Yakasanganiswa ne inorganic binders, hupfu huchapa hutano hwakanaka kwazvo;akaporesa madhakaneVE3311 yakavandudza kunamatira,flexibility, deformability uye abrasion kuramba.
Nekuda kwekuumbwa kwakakosha kwehupfu, dhaka rakagadziridzwa neADHES® VE3311 richava nemhedzisiro inogara pakudzivirira mvura.
ADHES® AX1700 ndeyere-inorasika polima hupfumaererano nestyrene-acrylate copolymer.Nekuda kwekunyanya kugadzirwa kwayo, iyo anti-saponification kugona kweAX1700 yakasimba zvakanyanya.Inogona kushandiswa zvakanyanya mukushandurwa kweyakaoma-yakasanganiswa dhakayezvicherwa sementitious zvinhu zvakaita sesimende, slaked lime uye gypsum.
ADHES® AX1700re-inorasika polima hupfuinopa kushanda kwakanaka, nyore trowel application uye yakanakabonding performance, uye inogona kuderedza kunyura kwemvura, kuwedzera kuchinjika, kunamatira kwakanaka kune akasiyana substrates akadai polystyrene foam board, mineral wool board.Mortars withRD PowderAX1700 ichave yakanaka kupfeka kuramba, yakakwirirabonding simba, uye gasi rakaderera riri mudhaka.